Dodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride (BKC) - China Juancheng Elite Industry & Trade
Biocide uye Algicide
Water kurapwa makemikari
Trichloroisocyanuric asidhi Multifunction Tablet
kuiisa chlorine BCDMH
SDIC 56% 8-30 pajira riya
kuiisa chlorine TCCA
kuiisa chlorine yakasviba
Kwete CAS 8001-54-5 kana 63449-41-2, 139-07-1 Molecular uremu: 340,0
DDBAC / BKC ndeimwe Quaternary Ammonium kirasi Cationic surfactants, kuva nonoxidizing biocide. Rinoshandiswa nevakawanda senzira disinfectant muna Hospital, Livestock uye Utsanana hwemuviri sectors. Dual biocidal uye detergency zvivako nechokwadi chakakwirira efficacy pamusoro Mabhakitiriya, Algae uye Mafungus uye wakafukidza Mavhairasi panguva chaizvo yakaderera ppm kuwanda. DDBAC / BKC wakanganwirawo muchiaparadzira uye rakapinza zvivako, pamwe zvakanakira yakaderera toxicity, hapana toxicity kuwanda, soluble nemvura, yakakunakira kushandiswa, dzisisina nemvura pokuoma. DDBAC / BKC rinogona rinoshandiswawo sezvo Anti-nokuvhuvha mumiriri, antistatic mumiririri, emulsifying mumiririri uye kunatsiridza mumiririri mune dzakarukwa uye värjäys minda.
Oil & Gas Mapaipi ngura inhibitor. Rinodzivirira inotungamirwa sulphurous magasi. De-emulsifier / sludge mudariki kuti kunowedzera mafuta dzokubudisa.
ZvaAtemisi sipo-Sanitisers Benzalkonium chloride zvakanaka chinayo vose Microbicidal & Detergency Properties kupinda Products kuti Ivhu kupinda & Disinfection, izvo zvinoita yakanaka yokuti noutsanana Products nokuda Utsanana hwemuviri, Hospital, Livestock uye Food & Dairy kushandiswa.
Pharmaceuticals & zvizorwa Safety Factor pamusoro Benzalkonium Chloride kunotungamirira kuzoshandisa Various Topical uye Ocular Products sezvo zvisaora uye kuti optimize Emolliency uye Substantivity
Food & Beverage Industry Nekuda kwayo dzisiri chepfu, dzisiri kungatikanganisa, asiri tainting, asiri staining unhu, Benzalkonium Chloride iri zvinowanzoshandiswa Pfungwa yokuti zviri Cleaner-Sanitisers kuti:
Dairy Industry Fisheries Food Storage Motokari dzehondo
Slaughter Houses Bottling Plants Mukaka Storage Motokari dzehondo
doro Eenhede Industry Cold Storage miti
Polymer & Coatings Benzalkonium Chloride rinoshandiswa nevakawanda somunhu Anti-kunofambira mberi, Emulsifier & zvisaora muna Coatings Industry (pendi, Wood Treatment, Electronics)
Chemical Industry Benzalkonium Chloride ane siyana kushanda muna Chemical Industry sezvo Precipitant, Pasika Kutamisirwa anowedzera, Emulsifier / De-Emulsifier, etc.
Water Treatment Benzalkonium Chloride rinoshandiswa Water & Effluent Treatment Formulations uye Algaecides nokuda Swimming Pools
Aquaculture Benzalkonium Chloride kunoderedza nezvaidiwa anokuvadza Mishonga inorwisa muna Aquaculture kuburikidza nani utsanana. Kushandiswa Water Treatment, General Site Disinfection, Fish chisvetasimba Removal, Madzivirirwe pamusoro Infectious Disease In Fish & dzemugungwa.
Timber Protection Global kwezvakatipoteredza hanya kwakaita kuti kuwedzera yaitsiva chlorinated biocides vane njodzi, biodegradable Benzalkonium Chloride muna Wood Protection. Hunoratidza wakanaka fungicidal uye algaecidal zvivako, uye zvikuru inobudirira pamusoro zvimwe zvinenge yakasanganiswa Formulations.
Pulp & Paper Industry Benzalkonium Chloride rinoshandiswa senzira General Microbicide kuti nebhitumini Control & Kwakanaka Management, uye anovandudza Paper Kudzora (Kunopa Simba & Antistatic ehupfumi)
Textile Industry Benzalkonium Chloride mhinduro anoshandiswa sezvo Moth nomushonga wezvipembenene, Permanent Retarders mu kudhaya pamusoro Acrylic Fibers pamwe Cationic Dyestuffs.
Leather Industry Benzalkonium Chloride kuchititadzisa kukura Mould & nokuvhuvha musi Anovanza. Hwezvekukurukurirana Leather kunyoroveswa, Wetting & kudhaya.
Horticulture & Vemhuri Benzalkonium chloride iri nyanzvi pamusoro Mould, nokuvhuvha, Moss, Mafungus & Algae uye rinoshandiswa kuti okuchenesa uye kugadzirira kwemarudzi ose hunoonekwa: Greenhouses, Roofing, migwagwa, Wooden decking, anoteura, Masonry
Kutarisika Hauoneki kuti yellowish segirazi mvura Yellowish njenjemera mvura
Active gutsikana% 48-52 78-82
Amine munyu% 2.0 Max 1.0 Max
ph 6.0 ~ 8.0 (sezvazvakanyorwa) 6.0-8.0 (1% mvura mhinduro)
Sezvo nonoxidizing boicide, chipimo chemushonga kuti 50-100mg / L Zvinosarudzwa; sezvo sludge remover, 200-300mg / L Zvinosarudzwa, zvakakwana organosilyl antifoaming mumiririri inofanira kuwedzerwa kuti chinangwa ichi. DDBAC / BKC inogona kushandiswa pamwe nemamwe fungicidal akadai isothiazolinones, glutaraldegyde, dithionitrile methane nokuda synergism, asi hazvigoni kushandiswa pamwe chlorophenols. Kana tsvina iri paaizooneka pashure akakandwa kubva chigadzirwa ichi mu achiparadzira mvura inotonhorera, kuti tsvina inofanira yakasvinwa kana nokupfutidza kure munguva kudzivirira dhipoziti yavo pasi nekunhonga tangi pashure froth kunyangarika.
No kubatane nekuita pamwe anion surfactant.
Pasuru uye Storage:
200L mapurasitiki Drum, IBC (1000L), vatengi 'kudiwa. Storage kwegore rimwe unyengeri mukamuri uye nzvimbo yakaoma.
A shoma munhuhwi omuarumondi, hapana rinooneka kurudziro kuna ganda. Kana ndasangana, Kugeza nemvura.
Previous: Trichloroisocyanuric asidhi Multifunction Tablet
Isothiazolinones (CMIT / with)
Kuiisa chlorine yakasviba Hwendefa rongedza
TCCA 90%, 200g piritsi
CMIT / with 14%
TCCA 5tablets ari chubhu iri dhiramu
Address: NO.66 kuEast Renming Road, Juancheng, Heze, Shandong, China 274600